Dad: Loogu talagalay, dharkan dharka ah ee madow waa Kate Middleton oo ah kuwa ugu xanaaq badan - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Dad: Qaar badan, dharka madadaashan madow waa Kate Middleton ee ugu xanaaq badan
Dad: Qaar badan, dharka madadaashan madow waa Kate Middleton ee ugu xanaaq badan
Kate Middleton wuxuu marwalba ahaa midka ugu weyn ee qaabka loo yaqaan 'Conservative style': Duchess of Cambridge wuxuu inta badan soo jiidanayaa dareenkiisa iyada oo keliya sababtoo ah cutubkeedii caadiga ahaa iyo jilicsanaa.
Akhri ALSO: Dharka noocan ah wuxuu noqon karaa Kate Middleton
Taasi waxay tiri, mararka qaarkood waxay cadeeyn kartaa aduunka in aysan kaliya ku ciyaarin amaankeeda iyada lafteeda. Horudhaca filimka War Horse 2012 wuxuu ahaa mid ka mid ah waqtigaan.
Kate wuxuu runtii aad ula yaabay dadkii badnaa dharka madow oo dhulka ku yimid, oo uu naqshadeeyey Alice Temperley. Tani waxay soo jiidatay tikidhka Faransiiska waxaana soo bandhigay suunka midibka mindhicirka leh ee lagu qurxiyo mindhicirka, iyo sidoo kale gacmo gaabis ah ilaa lugaheeda.
Akhri ALSO: Dhibaatada moodada ama tijaabinta geesinimada leh? Kate Middleton's dharka buluugga wuxuu u kala qaybiyaa kanabada
Dharka ayaa sidoo kale lahaa qulqulo qulqulaya iyo xargo jilicsan oo bixiya shucaac in uu ahaa maqaarkiisa.
In kasta oo ay tahay Duchess Waxba kama sheegin jirkeeda, dharka ayaa si gaar ah u xanaaqsanaa sababtoo ah waxay ahayd doorasho midabo dhif ah iyada.
Hooyo saddexda ah waxay la socotey kooxdan iyada oo labadoodaba ka mid ah quraarado qurxoon oo qurux badan iyo jumlado jajab ah, iyada oo ay intaa dheer tahay in timaheeda ay ka baxdo si ay u sameeyaan caddaalad si ay u qurux badan yihiin.
Iyada oo ay ka muuqato sawirro qotodheer ah iyo dibnaha casaanka ah, Kate ayaa xaday bandhigga muuqaalkan.
Marwalba waa mid xiiso leh in la arko sida uu Kate u maamulo si aaney aheyn mid si aan macquul ah uga tagin hal darajo kale. Ma caawin karno laakiin waan ku faraxsanahay xirfadihiisa casriga ah!
Akhri ALSO: Kate Middleton waxay muujineysaa lugaheeda caato ah oo ku jirta jilicsan oo cufan ah
Munaasabad lagu xusayo "sharfta xusuusta" ee ra'iisul wasaaraha Nipsey Hussle
Alan Cumming wuxuu yimaadaa Palo Alto si aad uhesho sida ilmo - dadka